Faroole oo Aragtidiisa ku Biiriyay xaaladda kala guurka ah ee Soomaaliya – Radio Daljir
Faroole oo Aragtidiisa ku Biiriyay xaaladda kala guurka ah ee Soomaaliya
Maarso 26, 2016 2:51 b 0
Garacad, 26, March, 2016-(Daljir)_Ra’iisul wasaaraha Somalia Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa maanta tagay hoyga uu ka degan yahay magaalo madaxda Puntland ee Garowe, Madaxwaynihii horre Cabdiraxmaan Shiikh Maxamed Faroole, iyadoona ka wada hadlay arimaha doorashada Somalia ee sanadkan.
Kullan oo saxaafadu dibad joog ka ahay ayaa diirada lagu saaray qaabka doorasho barlamanka Federaalka, kaasi oo lagu soo xulayo nidaamka 4.5.
Ma jirto cid la hadashay saaxaafa oo ka warbixisay kulan maanta ee Ra”isul wasaaraha Somali iyo Farole.
Raisal wasaaraha ayaa imaanshihiisa la xiriirtaa sidii shacabka Puntland u qaadan lahaayeen nidaamka 4.5, kasoo dhowaan dadweynaha mandiqadaan daga diideen.
Axmed Madoobe oo ka Hadlay khilaaf ka jiray Gobolka Gedo oo laga Heshiiyay